AmaProteas asehlomela ukuqala kweNdebe yoMhlaba
UTEMBA Bavuma ukaputeni wamaProteas uveze ukuthi useyalulama kulandela ukuhlinzwa njengoba sebebheke ukuqala kweNdebe yoMhlaba ye-T20 ezoba se-UAE Isithombe: BACKPAGEPIX
IQEMBU lesizwe lakuleli lekhilikithi selingene esigabeni sokugcina samalungiselelo eNdebe yoMhlaba ye-T20 ezoba se-United Arab Emirates ngasekupheleni kuka-Okthoba.
AmaProteas atheleke eDubai ngoMsombuluko ngaphambi kokubhekisa amabombo e-Abu Dhabi lapho ezohlangana khona nabadlali abayisikhombisa abasayingxenye yomqhudelwano we-Indian Premier League, ozophela ngo-Okthoba 15.
Iqembu lakuleli lizovalelwa izinsuku eziyisithupha, ngokwemigomo ye-Covid 19, ngaphambi kokuthi liqale ukuziqeqesha ndawonye.
Lizobe selidlala imidlalo emibili yokungcweka ne-Afghanistan ngo Okthoba 18, bese litholana phezulu ne-Pakistan ngo-Okthoba 20.
Ukaputeni wamaProteas, uTemba Bavuma, uthe wethemba ukuthi luzoba wusizo kakhulu kubona ulwazi oluzofika nabadlali abayibambe kwi-IPL.
"Silindele ukuthi laba abadlala kwi-IPL babe usizo olukhulu eqenjini lethu njengoba lo mqhudelwano use-United Arab Emirates. Sibheke ukuthi basicobelele ulwazi ngezimo esizobhekana nazo nezinkundleni okuzodlalelwa kuzona.
"Uma sesiphumile ekuvalelweni sizimisele ukuthi sisebenze ngokuzikhandla ukuze sikulungele ukuqala kwemidlalo yeNdebe yoMhlaba," kusho uBavuma.
AmaProteas azoqala lo mqhudelwano ne-Australia ngo-Okthoba 23, abhekane neWest Indies ngo-Okthoba 26, adlale namaqembu amabili azophumelela kweyokuhlunga, ngaphambi kokubhekana ne-England ngo-Novemba 6.
UBavuma uthe kusanzima ukuhlelela eminye imidlalo njengoba bengakazi ukuthi bazodlala namaphi amaqembu.
"Kunzima ukulungiselela le midlalo emibili esingazi ukuthi sizoyidlala nobani. Okwamanje sisaqinise kakhulu kule esizoyidlala namaqembu esiwaziyo ukuze ifike sesisesimeni esihle. Uma sesibazi laba abanye ababili sizobe sesibhekisisa ukuthi sizodlala kanjani nabo.
"Siseqoqweni elinzima kodwa into ebesingeke sikwazi ukuyigwema leyo. Sesike sadlala namaqembu athile aseqoqweni lethu futhi sadlala kahle. Kumele sithathe okuhle esakwenza kuleyo midlalo,“ kuqhuba uBavuma.
Uqhube ngokuthi useqalile ukuzilolonga kumanethi kulandela ukulimala kwakhe bedlala neSri Lanka ngenyanga eyedlule. Washaywa ibhola esithupheni waze wadinga ukuhlinzwa kodwa uthe useyalulama.
"Ngokusho kodokotela konke kusahamba ngohlelo futhi nami ngigculisekile ngendlela engizizwa ngayo. Angikabi wumqemane kodwa ngizoqhubeka ngisebenze ukuze ngikulungele ukuqala kweNdebe yoMhlaba," kusho uBavuma.